Iko kusangana kweTerevhizheni neInternet | Martech Zone
Iko kusangana kweTerevhizheni neInternet
Chipiri, Gunyana 6, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Kunyangwe GoogleTV neAppleTV zvichipindirana, zvinoita sekunge masisitimu aya angori iwo webhu akagadziridzwa kuti aone paterevhizheni. Tiri kuona kufambira mberi muhunyanzvi - tarisa iyo LG Pentouch (ichi chiziviso). Ndinoshuva dai ndakanga ndaona iyo 60 - LG Pentouch Plasma usati watenga hofisi yedu LCD TV:
Kunze kwekuchinja mashandisiro atinoita masikirini makuru kubasa, zvinoitawo kuti ndinetseke kuti vashambadzi vanogona sei kusangana pamba. Ingori nyaya yenguva ndisati ndatenda kuti tichaona zvidimbu zvinoshanda pamusoro pezviratidzwa uye kushambadzira kubvumira kudyidzana… kunyangwe kusvika padanho rekufona nekuraira yakananga kubva kushambadziro!
Vashandisi vanogona kumisikidza iyo Pentouch mode nekamwe chete pane iri kure kutonga. Mune Pentouch mode, vashandisi vanokwanisa kuwana mafaera (senge PowerPoints) uye chero zvimwe zvirimo kubva paPC yavo, vozvishandira, vozvigadzirisa kana kuzvifambisa kutenderedza skrini zvakanyanya nekureruka. Iyo TV inotsigira panguva imwe chete maviri-peni kushandiswa, uye peni mabhatiri anogona kudzoreredzwa kuburikidza neUSP chiteshi kumashure kweiyo TV unit.
Uchishandisa iyo TV sutu yesoftware, vashandisi vanogona kudhirowa mifananidzo yakanangana pachiratidziro uyezve chengetedza iwo mafaera kuti uwedzere kugadzirisa kana kukanganisa kukanganisa. Kana iyo PC yakabatana neprinta, vashandisi vanogona kupurinda yavo Pentouch zvisikwa, futi. Zvimwe zvakaomarara software zvinosanganisira Garari, iyo inouya neyakavakirwa-mukati yemasiraidhi show, Mhuri Chalenda uye Dhijitari Photo Furu, iyo inoita kuti vashandisi vashongedze basa ravo nefuremu yesarudzo yavo. Iyo Pentouch TV inosungirirwawo neinternet, ichibvumira kuti zvimwe zvinoshandiswa kuti zvitorwe sezvaunoda.
Iyo Pentouch TV inoshandisa inodzivirira isina-girazi screen, pamwe neRGB kutaura uye yakagadziridzwa kupenya kwemifananidzo yakashata. Kutaridzika kwekuona kunowedzerwazve kuburikidza neiyo auto kupinza kudzora basa uye neruzivo rwekugadzira michina. Mukuyera pamwe neyunifomu yechinhu chakashongedzwa TruSlim Chimiro dhizaini, iyo Pentouch TV inoshandisa sitendi iyo yakagadzirirwa kunyanya kuona kuti TV haibati pamusoro apo varidzi vari kushandisa iyo Pentouch ficha.
8 Zvikonzero nei Vashanyi Vanosiya Saiti Yako
Anatomy yeFacebook fan